Siyaasadda Qarsoonnimada - Yixing Holly Technology Co., Ltd.
Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah ayaa qeexaya sida macluumaadkaaga shakhsiyeed loo ururiyo, loo isticmaalo, iyo la wadaago marka aad soo booqato ama ka iibsanayso konsungmedical.com.
Konsungmedical.com waxay si adag uga go'an tahay inay ilaaliso sirtaada oo ay siiso deegaan badbaado leh dhammaan isticmaalayaasha.Siyaasaddu, waxaanu jecelnahay inaanu ku ogeysiino sida macluumaadkaaga shakhsiyeed loo ururiyo, loo isticmaalo, loona wadaago marka aad soo booqato ama wax ka soo iibsanayso www.konsungmedical.com.Waa waajibaadkeena iyo waajibaadkeena inaan ilaalino sirta isticmaalayaasha oo dhan.
WAA MAXAY XOGTA GAAR AH EE AANU URURINAYNAA?
Markaad booqato bogga, waxaanu si toos ah u ururinnaa macluumaadka qaarkood ee ku saabsan qalabkaaga, oo ay ku jiraan macluumaadka ku saabsan biraawsarkaaga, ciwaanka IP-ga, aagga wakhtiga, iyo qaar ka mid ah cookies-ka lagu rakibay qalabkaaga.Intaa waxaa dheer, markaad baadhayso bogga, waxaanu ururinaynaa macluumaadka ku saabsan boggaga internetka ee gaarka ah ama alaabta aad aragto, mareegaha ama ereyada raadinta ee kuu soo gudbiyay bogga, iyo macluumaadka ku saabsan sida aad ula macaamilto bogga.Waxaan u tixraacnaa macluumaadkan si toos ah loo ururiyay sida "Macluumaadka Qalabka".
Waxaan uruurinaa Macluumaadka Qalabka anagoo adeegsanayna tignoolajiyada soo socda:
- "Kukiyada" waa faylal xog ah oo lagu dhejiyo qalabkaaga ama kombiyuutarka oo inta badan ay ku jiraan aqoonsi gaar ah oo qarsoodi ah.Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan cookies, iyo sida loo joojiyo cookies, booqo http://www.allaboutcookies.org.
- "Log files" raad raac tallaabooyinka ka dhacaya goobta, oo ururi xogta ay ku jiraan cinwaankaaga IP-ga, nooca browserka, bixiyaha adeegga internetka, bogagga tixraaca/ka bixista, iyo taariikhda/waqtiga stamps.
- "Web Beacons", "tags", iyo "pixels" waa faylal elektaroonik ah oo loo isticmaalo in lagu duubo macluumaadka ku saabsan sida aad u baadho bogga.
Intaa waxa dheer marka aad wax ku iibsanayso ama aad isku daydo inaad wax ku iibsatid bogga, waxaanu kaa ururinaynaa macluumaadka qaarkood, oo ay ku jiraan magacaaga, ciwaanka biilasha, ciwaanka rarida, macluumaadka lacag bixinta (ay ku jiraan lambarada credit card), ciwaanka iimaylka, iyo lambarka telefoonka.Waxaan u tixraacnaa macluumaadkan sida "Macluumaadka Dalabka".
Markaan ka hadalno "Xogta Gaarka ah" ee Siyaasaddan Qarsoonnimada, waxaan ka hadleynaa labadaba Macluumaadka Qalabka iyo Macluumaadka Dalabka.
SIDEE U ISTICMAALAA XOGTAAGA GAAR AH?
Waxaan u isticmaalnaa Macluumaadka Dalabka ee aan aruurineyno guud ahaan si aan u fulino amar kasta oo lagu soo gudbiyo bogga (oo ay ku jiraan socodsiinta macluumaadkaaga lacag-bixinta, diyaarinta dhoofinta, iyo ku siiya qaansheegyada iyo/ama dalbashada xaqiijinta).Intaa waxaa dheer, waxaan u isticmaalnaa Macluumaadka Dalabka:
- kula xidhiidh;
- Iska ilaali amarradayada khatarta iman karta ama khiyaanada;iyo
- Markaad la socoto dookhyada aad nala wadaagtay, ku siina macluumaadka ama xayaysiisyada la xidhiidha alaabada ama adeegyadayada.
Waxaan isticmaalnaa Macluumaadka Aaladda aan aruurinno si ay nooga caawiso baaritaanka khatarta suurtagalka ah iyo khiyaanada (gaar ahaan, cinwaankaaga IP), iyo guud ahaan si aan u wanaajino oo aan u wanaajino Boggayaga (tusaale ahaan, annaga oo dhalinayna falanqayn ku saabsan sida macaamiisheena ay wax u baadho oo ula falgalaan Goobta, iyo si loo qiimeeyo guusha suuqgeynteena iyo ololahayada xayeysiinta).
MIYAAN WADAAGNAA XOGTA SHAKHSIGA AH?
Ma iibinno, kirayno, kirayno ama si kale u shaacinay xogtaada shakhsiyeed cid saddexaad.
Waxa laga yaabaa in aan cusboonaysiinno siyaasaddan khaaska ah waqti ka waqti si aan u milicsano, tusaale ahaan, isbeddelada ku yimaada dhaqamadayada ama sababo kale oo hawlgal, sharci ama sharci dartood.